पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बदमासीः हस्ताक्षर सांसदकै, पुर्जी छोरालाई - पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बदमासीः हस्ताक्षर सांसदकै, पुर्जी छोरालाई
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १७ आश्विन, 02:14:06 AM
काठमाडौं । टिकुलिया घाटको दुर्घटनाबारे सोधपुछका लागि प्रहरीले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रोनियारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो ।
सुमितको नाममाप पुर्जी जारी भए पनि उक्त स्थानमा निर्माणधीन पुलको ठेक्का सम्झौतापत्रमा हरिनारायणका छोरा हुन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएको सात दिन वितिसक्दा पनि सुमितलाई प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन ।
गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट पाउने निश्चित भएपछि हरिनारायण संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेका थिए । २०७३ चैत अन्तिम साता केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पर्साको पोखरीयामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा रौनियारलाई टीक र माला लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए ।
कागजी रुपमा सुमितलाई सञ्चालक बनाए पनि सांसद रौनियार कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का सम्झौता, भुक्तानीका लागि सरोकारवाला अड्डामा आफैँ जाने गरेका छन ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य खबर रहेको छ । , यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
२०७५, १७ आश्विन, 02:14:06 AM
पप्पुलाई अदालतको संरक्षण, कालोसुचीमा नराख्न आदेश !
१५ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा, तर पप्पु परेन
भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरसँगै सांसद रौनियार पदबाट स्वतः निलम्बित !
ठेक्का ओगट्ने, समयमा काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नेपाल सरकारको नयाँ ठेक्का !
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गर्यो पर्साका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्मान